Ciidamadii Ugu Badnaa oo ka tirsan Xasilinta oo Muqdisho lagu daadiyay – Daily Som
Ciidamadii Ugu Badnaa oo ka tirsan Xasilinta oo Muqdisho lagu daadiyay
Laamaha Amaanka Soomaaliya ayaa aad u adkeeneyay amaanka Guud ee magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeesan ee Ramadaan, waxaana qeybo badan oo magaalada kamid ah lasoo dhoobay ciidamadii Ugu badnaa oo xaqiijinaya Amniga.
Sida aan ku soo qaadanay horaantii todobaadkaan waxaa Magaalada inteeda badan lagu soo celiyay Ciidamadii Xasilinta Muqdisho, meelaha ugu badan ee aan ee ciidamada la geeyay ayaan ku sheenay Isgooysyada, Sanca, Jirdiinka, Folorance ilaa tarabuunka oo ah Wada wadmaha, halka aan wararka ku soo qaadnay in ciidamo la geeyay Wadad warshada ilaa Isgoyska Ex conrol.
sidoo kale waxaa jira Ciidamo la geeyay Goroonka Diyaarada ee degmada Dayniile, Siinka dheer iyo wadooyin badan oo soo gala Magaalada Muqdisho ka yimaada labada Shabelle.
Ciidamadaan cusub ee lagu daadiyay Muqdisho ayaa ah ciidamo gaar ah oo hoos tagaya Holwgalka Xasilinta Caasimada waxaana loogu tala gashay in ay wax ka qabtaan Howlgalada qorshaysan ee alshabaab iyo Daacish..
Xaafadaha magaalada Muqdisho qaarkood ayaa lagu arkayaa ciidamo koox koox meel u fadhiya iyo kuwo u socda, waxaana ciidankan ay xiran yihiin dareeska ay caanka ku yihiin ciidanka Xaslinta caasimada .
Ciidamadii Ugu Badnaa oo ka tirsan Xasilinta oo Muqdisho lagu daadiyay added by Staff on May 16, 2018